एस्ट्रोजन एक महिलाको ovaries मा उत्पादित गर्दै छन् कि स्टेरयड हर्मोन भनिन्छ। साथै, एस्ट्रोजेन धेरै सानो मात्रा हो र adrenal ग्रन्थीहरूको मा संश्लेषित छन्, त्यसैले सानो परिमाणमा यो हर्मोन र त्यहाँ मानिसहरूको रगत छ।
महिला को स्वास्थ्य को लागि एस्ट्रोजन स्तर सामान्य दायरा भित्र थियो महत्वपूर्ण छ। को कमी महिला हर्मोन गर्भावस्था समस्या निम्त्याउँछ र साथ रजोनिवृत्ति सम्बन्धित धेरै अप्रिय लक्षण गराउँछ।
तथापि, एस्ट्रोजन को एक अतिरिक्त र कुनै कम हानिकारक, यो अवस्था fibroids, गर्न सक्छ देखि कम libido, depressive राज्य अमेरिका र माइग्रेन। यो शरीर मा एक सन्तुलन कायम गर्न त्यसैले महत्त्वपूर्ण छ।
तर के विश्लेषण यदि शरीर मा एस्ट्रोजन को स्तर पनि कम छ कि देखाए? लिइरहेको सुरु हर्मोन चक्की? तर यी औषधी मात्र होइन लाभ, तर हानि ल्याउन सक्छ।
यो हर्मोन को स्तर केही खाद्य पदार्थ खाने द्वारा हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने वृद्धि बाहिर जान्छ। उत्पादनहरु मा एस्ट्रोजेन - यो महिला सेक्स हर्मोन को पूर्ण एनालग छैन पक्कै पनि छ, तर तिनीहरूले यस्तै संरचना र phytoestrogens भनिन्छ।
त्यसैले, के खाद्य पदार्थ एस्ट्रोजन समाविष्ट? phytoestrogens सामग्रीमा च्याम्पियन सोया पहिचान छ। निस्सन्देह, कुनै एक कल सोया बस जस्तो, बिक्री मा सोया आधारित बनेको उत्पादनहरु को एक धेरै नम्बर छन् किनभने चपाउनु। यो टोफु, सोया निगालो, सोया दूध र उत्पादनहरु को एक किसिम को नाम दर्जनौँ।
यो भटमास मा निहित पदार्थ, मात्र होइन महिला हर्मोन को स्तर वृद्धि गर्न सक्ने, तर पनि यस्तो स्तन, osteoporosis र अरूको क्यान्सर रूपमा रोगहरु रोक्न मद्दत भने हुनुपर्छ।
रजोनिवृत्ति सुरु जसमा महिला उत्पादनहरूमा एस्ट्रोजेन, प्रयोग गर्न विशेष गरी उपयोगी। हर्मोन को एक पर्याप्त रकम यस्तो भन्ने तथ्यलाई योगदान रजोनिवृत्ति लक्षण irritability, टाउको दुखाइ, तातो चमक, रूपमा कम उच्चारण हुन्छन्। त्यसैले, महिला अवधि मा सोया संग खाद्य पदार्थ खान धेरै उपयोगी छन्।
फलियां र अनाज - पनि एस्ट्रोजन समावेश उत्पादनहरु छ। भनेर रगत मा हर्मोन को महिला स्तर सुधार गर्न आवश्यक गर्नेहरूलाई, यो थप अनाज व्यञ्जन खाने गर्नुपर्छ। एस्ट्रोजेन यस्तो कफी, eggplants, गाजर, टमाटर, कद्दू रूपमा खाद्य पदार्थ फेला परेन। यो रक्सी समावेश किनभने तिनीहरूलाई धेरै र बियर मा तथापि, दूर अर्डर हर्मोन को स्तर वृद्धि गर्न मा पेय को प्रयोग द्वारा लगे, यो, सिफारिस गरिएको छ। यस्तो काउली र ब्रसेल्स स्प्राउट्स, विशेष गरी ब्रोकोली रूपमा महिला उत्पादनहरु लागि धेरै उपयोगी।
तर पशु उत्पादन मा उपयोगी एस्ट्रोजेन कि, तपाईं प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। निस्सन्देह, तपाईंले प्राकृतिक मासु र पशु बोसो खान भने, हर्मोन को अतिरिक्त को मान्यता वृद्धि यसलाई जाने छैनन्। तर आधुनिक पशुधन परिसर मा लागि गाई चाँडै वजन बढाउनका र मासु को एक उच्च उपज दिनुभयो, हर्मोन सहित फिड पूरक, एक किसिम प्रयोग गर्नुहोस्। स्वाभाविक, यस्तो खाना को प्रयोग मासु गुणस्तर असर गर्छ, त्यसैले यो अक्सर यसलाई लाभ उठाउन सक्दैन, अत्यधिक मात्रा मा निहित छन् पशु मूल को खाद्य पदार्थ मा एस्ट्रोजेन छ।
त्यसैले, यदि एस्ट्रोजनको स्तर उठाउनु एउटा आवश्यकता छ, यो राम्रो बोट खाद्य पदार्थ मा निहित phytoestrogens प्राथमिकता दिन छ।
निस्सन्देह, सबै अवस्थामा, यो सम्भव विशेष शक्तिद्वारा एस्ट्रोजनको स्तर उठाउनु छ। यी अवस्थामा, तपाईं पूरक आहार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। प्रयोगको कृत्रिम हर्मोन स्वागत भन्दा कम हानिकारक छ त्यसैले यी additives, नियम, प्राकृतिक phytoestrogens रूपमा शामिल। तर, हर्मोन को एक अतिरिक्त यो कमी भन्दा कुनै कम हानिकारक ल्याउन सकिन्छ, उपाय पालना गर्न आवश्यक छ।
Novoslobodskaya मा पोषण नाम Friman संस्थान: पोषण को संस्थान को समीक्षा र ए Friman तथ्याङ्कले को सुधार
एक्सप्रेस आहार। के छिटो वजन गर्न खान?
तेज वजन आहार
गुर्दे र नेफ्रोनको आणविक संरचना
उपन्यास "टापु" - निकट भविष्यमा Huxley एक पैदल
कन्सोलमा लागि "Maynkraft" कुराहरू आदेश
ज्योतिष प्रेम, वा मानिस-सिंह संग प्रेम पर्नु कसरी
आहार Anity Tsoy - वजन सबै भन्दा राम्रो तरिका
के कोलेस्ट्रल प्रभावकारी लोक उपचार
उचित पोषण: नुन iodized थाइरोइड क्यान्सर निम्त्याउँछ?